Home Wararka Xildhibaan Zakariye oo ugu baaqay Xildhibaanada inay ka feejignaadaan wax ka bedelka...
Xildhibaan Zakariye oo ugu baaqay Xildhibaanada inay ka feejignaadaan wax ka bedelka Xeer Hoosaadka Baarlamaan
Xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo ka tirsan Golaha Shacabka ayaa ugu baaqay Xildhibaanada inay ka feejignaadaan wax ka bedelka Xeer Hoosaadka Baarlamaanka oo la doonayo in meelo gaar laga bedelo.
Xildhibaan Zakariye ayaa sheegay in xeer hoosaadka uu yahay meelaha Baarlamaanka ka dhaq dhaqaaqo, isagoo xusay in toos loo bartilmaameedsanayo xasaanadda Xildhibaanada.
“Annagu wax waa garan karnaa, dad iskool galay nahay oo jaamacado ka baxay, dad wax badan shaqeynayay baa nahay, xeer hoosaadkan waa bartilmaameed waxaa la abaaray meelaha baarlamaanka ka dhaq dhaqaaqo, hadaad idinka garan weydaan hadaad iska mootisaan, aniga qof ayaa ka ahay, xasaanadii Baarlamaanka waxaa la geliyay calaamad su’aal.
Waxaa uu sheegay in meelaha Baarlamaanka ka dhaqaaqayo la bartilmaameedsanayo sida qodobka 68aad ee Mooshinka ah, isla markaana la doonayo in awooddii Baarlamaanka hoos loo dhigo.
Xildhibaan Zakariye ayaa ugu baaqay Guddiga Xeer Hoosaadka inay dib u celiyaan dhammaan documentiga xeer hoosaadka, isla markaana loogu tala galay in laga bedelo meelo gaar ah oo aan loogu tala gelin in nuxurka wax laga bedelo.
Qodobada Xeer Hoosaadka ayaa ah awoodaha Xildhibaanada, marka laga soo tago Dastuurka, waxaa ku jira qodobo faraya waajibaadka Xildhibaanka ee la xisaabtanka Xukuumadda.
Previous articleAqriso:Xisbi oo hogaaminayo Xasan Sheekh oo looga dhawaaqay Muqdisho
Next articleDowlada Soomaaliya oo Codsatay inay AMISOM sii Joogaan Dalka.
Madaxweyne Farmaajo oo Warqad Casuumaad ah u Diray Dhigiisa Suudaan(Al-bashiir Jawaab...
Q.M oo ku boorisay Xasilooni Siyaasadeed!!